Kedu ndị bụ ndị na-ere ahịa kasịnụ n'ụwa? | ECommerce ozi ọma
Kedu ndị bụ ndị na-ere ahịa kasịnụ n'ụwa?
E-commerce ewetawo mmezi nke ọtụtụ ụlọ ọrụ, nke dị mkpa iji melite ịgbanwe na teknụzụ, ụlọ ọrụ dịka - Costco, Target, Lowe's, bụ ụlọ ọrụ na-anọwo na ahịa ruo ọtụtụ afọ, ma mechara daa n'azụ ruru ka e-commerce ọganihu, ma ihe dị mma bụ na ụlọ ọrụ ndị a na ọtụtụ ndị ọzọ nke "retail”Ma ọ bụ na-ere ahịa e-emelite na otú anya dị ọtụtụ n’ime ha na ha na-achịkwa ahịa mkpọsa.
1 Ọzọ anyị ga-ekwupụta nke bụ ụlọ ọrụ "ụlọ ahịa" kachasị ukwuu n'ụwa.
1.1 Stolọ ahịa Wal-Mart
1.2 The Home ebusa
Ọzọ anyị ga-ekwupụta nke bụ ụlọ ọrụ "ụlọ ahịa" kachasị ukwuu n'ụwa.
Stolọ ahịa Wal-Mart
Site na nnukwu ụlọ ọrụ kachasị na mkpọsa nke dị taa, abụghị naanị amaara n'ụwa niile, mana nwekwara ọtụtụ ụlọ ọrụ na mba ụwa, yana uru ruru ihe karịrị ijeri dollar 16, Wal-Mart o nwekwara saịtị azụmahịa e-commerce nke ya na mpaghara dị iche iche nke ụwa.
Tọrọ ntọala na United States na steeti Arkansas na 1962, Storeslọ ahịa ndị a na-enye ngwaahịa, site na nri, na uwe, ngwa, akwụkwọ, ịchụ nta na arịa azụ, nri na ngwa maka anụ ụlọ, na ahịa ọgwụ na ụdị ihe ịchọ mma dị iche iche. Ọ bụ ụlọ ọrụ kasịnụ n'ụwa n'ụwa n'usoro nke “Jeriko”Na-echegbu.
The Home ebusa
Lọ ọrụ ụlọ ahịa a bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa n'ihe gbasara ihe owuwu ụlọ, mmezi ụlọ na Mee N'onwe Gị. Companylọ ọrụ ụlọ ahịa a bụ nke mbụ na ụwa maka Mee N'onwe Gị, ndị ọzọ na-esote ụlọ ahịa na-ere ahịa dika ha di Lowe's na OBI, nwere ihe karịrị ụlọ ahịa 2,000 dị na United States, Canada, Mexico na China.
Ewezuga inwe ibe e-commerce ebe ndị mmadụ si mpaghara dị iche iche nwere ike ịnweta, chọọ ma zụta ụdị ngwaahịa dị iche iche iji melite ụlọ ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Kedu ndị bụ ndị na-ere ahịa kasịnụ n'ụwa?
Kedu otu igwe ọrụ ọchụchọ dịruru mkpa ịre ahịa saịtị e-commerce?
Kedu ihe m nwere ike ịzụta site na ụlọ ọrụ Player Pure Player?